Hayi, Greta ayikho Umchasi | Apg29
Ndenze email umfundi ithunyelwe kum apho umbhali nemimangaliso ingaba oneminyala eli-16 ubudala kokusingqongileyo Greta Thunberg Lowo ungumchasi-Kristu.
I ukufunda ngaphambili namhlanje kwiphephandaba mini umntu wathelekisa intshukumo imozulu kunye nentshukumo imvuselelo. Kodwa iintshukumo imvuselelo ukufumana ithemba, eningakwaziyo nina azifumane kwi intshukumo kwemozulu.
Ndenze email umfundi ithunyelwe kum apho umbhali nemimangaliso ingaba oneminyala eli-16 ubudala kokusingqongileyo Greta Thunberg Lowo ungumchasi-Kristu. Ukuze loo mbuzo ndimphendule ngoko nangoko:
"Hayi, Greta Thunberg ayikho Umchasi."
Greta ungumfazi. IBhayibhile ithi ukuba umchasi-yindoda, ngoko ke intelekelelo akhutyekiswe kwaoko. It awuhambisani kunye neBhayibhile.
2 ndandiswele 2: 3 . Makungabikho bani unilukuhlayo nangalunye uhlobo. Ngokuba ngaloo mini akuyi, ngaphandle kokuba inkunkuma sele lwenziwe, atyhileke umntu wesono, nasekutshabalaleni nyana [oko kukuthi, umntu], ibonakalalisiwe.
Kakade ke ukupapasha akukho email umfundi. Ngaphandle Umxholo mejlets zibhalweni, Bendinga nam ndingakhe ukuba komntu. Kwaye into yokugqibela ekuxakayo. Oku kubonakala ukuba igxeke Greta Thunberg.
Ndafunda ukuba football umqeqeshi owathi izinto ezingenangqondo kuye ngoku ukuze agxothwe . Ngokuqinisekileyo, oko ulwimi ezingafanelekanga, kodwa twisisa leswi ndzi swi. Ngaphambili, ndibone ikliphu kumabonakude American, mna ndiyakholwa ukuba kwakulapho, apho wagxeka intombazana eneminyaka eli-16 ubudala ngoko nangoko waxelela off ngomnye umntu ngala mazwi:
"Ungathini ugxeka umntwana, wena unguye na umntu oselemdala?!"
She is kuphela umntwana, kodwa yena iSifo ezintathu, endithe ngaphambili ufunde Wikipedia , kodwa ngoku kanye ithi kukho 'ngokudandatheka kunye neemvakalelo abanamava ngamampunge, "yaye 2018 naye bagqiba' ukuze kunokuba babulewe ekudakumbeni, kuyenza. "
Ukuba agxeke Greta unako ndayifumana imangalelwe nokugxeka umntwana egulayo. Ngale ndlela uye wayeka zonke iintlobo ukugxekwa ngokuchasene intshukumo ngeenxa Greta Thunberg.
Kakade ke akukho yena ngubani owenze ukuba iyaziwa kangaka kakuhle, kodwa oko imikhosi bokomliggande kunye nomdla kwezoqoqosho.
I musa amgxeke Greta, yena umntwana - kwaye umntu elixabisekileyo - abafuna uYesu Kristu. Into ngayo kakubi umdla bha nemikhosi. Ixesha lokuqala ndabona Greta Thunberg, Ndithe kwaoko kwamcaphukisa.
Ngoko Greta nto ayimenzi abe imikhulu kangaka nje, kodwa ngavele njalo. Akuqhelekanga ukuba onke amajelo eendaba ezisemva uze utshatise phezulu kuye. ukuqonda kwaye ngenxa yeso sizathu ukuba ngamnye ukuba kukho into ingendawo.
Nkqu intombi yam eneminyaka eli-13 ubudala, ngubani na Greta on Instagram , wacinga yakhe intetho UN fake , kwaye wandixelela kakhulu ngokuzenzekelayo kum ngaphambi kokuba ixesha lokuba sithethe nto.
Ngoko ke abo emva Greta Thunberg kwaba smart xa bathe bathumela kuye ngenxa nje awukwazi agxeke umntwana egulayo!
Kwaye yena ngaphezulu yonke into ukuze ufumane i-Nobel Peace Prize kakhulu ukuqonda ukuba, ukuba inkohliso. Ngaphambili kamongameli kunye ntliziyo kwemozulu Al Gore, wafumana ibhaso documentary wenza. Ndiye ndafunda ukuba uqikelelo xa umboniso yakhe ubuxoki kwaye kube njalo .
Kwiimeko ezinje nina nithi ukuba kuphela iminyaka elishumi apho kuzakugcinwa umhlaba. Efanayo ithi Greta kunye nabanye abantwana zangaphambili bakhe baye batsho into efanayo. Kwaba mzuzwana ke, malunga -20 - 30 kwiminyaka eyadlulayo !
Umhlaba uya kuhamba ngaphantsi
Umhlaba akayi kuhamba ngaphezu kweminyaka elishumi - hayi engama-20 okanye engama-30. Ke bonke abaprofeti basentsomini ukuba iza imiyalezo ezinjalo RAS. Okokuqala, uYesu umele eze emva, kwaye yena uya kubuyela eYerusalem kulo mhlaba!
Ukuba umhlaba uye phantsi, ngoko ke uYesu akukho mhlaba ukuze ubuyele. Ngoko ke, simele siqonde ukuba olu hlobo iziprofeto yentshabalalo bubuxoki.
Kodwa emva kokuba uYesu engukumkani phezu komhlaba iminyaka eliwaka emva kokubuya kwakhe, ngoko kuya kuba izulu elitsha nomhlaba omtsha! Kodwa kuya kubakho intshabalalo - oko kuya kuba savuka.
Umntu uye abhalwe kwiphephancwadi Church Greta Thunberg kuyinto umprofeti . Hayi, ukuba akukho nto umprofeti. Ukuba wayeza kuba umprofeti - ngoko ke amanga. A uprofeta Umprofeti ithemba kuYesu Krestu kwaye hayi umyalezo efana Uya Greta abo ngaphandle ithemba losindiso.
IMizekeliso 23:18: Ngokuqinisekileyo njengoko ikamva, yaye ithemba lakho aliyi kuba ndiyitshitshise.
UYeremiya 29: 1: Ndiyayazi izicwangciso ukuzama endikuzamayo ngenxa yenu, itsho iNkosi uYehova: iingcinga zoxolo, ezingezizo ezobubi; ukuba ndininike ikamva nethemba.
IMizekeliso 24:14: Ngoko ke ulwazi nobulumko umphefumlo wakho. Ukuba ufumanisa kubo, uya kuba nekamva, yaye akuyi kubakho ithemba lakho ngochuku.
Yeremiya 31: 1: Kukho ithemba ngekamva lakho, utsho uYehova. oonyana bakho baya kubuyela kwilizwe labo.
I ukufunda ngaphambili namhlanje kwiphephandaba mini umntu wathelekisa intshukumo imozulu kunye nentshukumo imvuselelo . Kodwa iintshukumo imvuselelo abangamaKristu uYesu ke ephakathi ukufumana ithemba, eningakwaziyo nina azifumane kwi intshukumo kwemozulu.
Kodwa intshukumo lwemozulu sele unqulo. Ndafumana ividiyo ku YouTube enomxholo othi: " Green Ukuvuselelwa | unqulo olutsha kwemozulu ". Lars Bern Swebb umnxeba umabonwakude nokuba Greta Thunberg ukuba imozulu motion ukuba lehlelo yentshabalalo . Amahlelo, siyazi ukuba abantu abotshwa kunye abahlelelekileyo, kodwa uYesu Kristu, abantu bayakhululeka.
Ukuba sibuyele ekuqaleni kweli nqaku, Kakade ke, ayikho Greta Thunberg Umchasi. Apho, ukufunda umshicileli emails kakhulu. Kwi email eqabelisa ezifana ukuya ku Greta Igama lokugqibela ngu 666 nokuba umbala ifana oluhlaza Islamic.
Kodwa kwelinye icala na intshukumo esingqongileyo ukuba ibe yinxalenye nosungulo Umchasi. Kukho imikhosi enamandla emva intshukumo kokusingqongileyo ezazinokuphumela umchasi-ozayo phezu kwetrone. intshukumo Air omsulwa ngokupheleleyo. Kuyo yonke le nto, abantu babe ezixhatshazwayo ukuba pawns kwi umdlalo yokugxeka.
Uhlaba iintsingiselo Order
Kwakhona eliyikhankanyileyo malunga nendlela ukunika igama elinentsingiselo eyahlukileyo. Maxa wambi sifunda ukuba Greta "ugwayimbo imfundo" xa kukho umbuzo yogwayimbo yesikolo. Kuba njani Wayeza kuxabela yesikolo ekwelinye ilizwe, anjenge-United States?
Okanye ukubiza ngokuba "ugwayimbo" okanye "ugwayimbo isimo". Asinto umbuzo we kusehla ezimbalwa, kodwa imiboniso kunye ubuxoki. Kufuneka ubize izinto kuba yintoni na. Kodwa ngale ndlela behlwayele izimvo neengcamango ezingqondweni zabantu ukuba nempembelelo kuzo ngakwicala ethile.
Cela Greta Thunberg uthandazele nabanye bonke abantu abangenalo ithemba. Thandazela ukuba abavangeli kunye nabanye abakhonzi iNkosi iya kubathumela ukuze beve isigidimi udumileyo weNkosi yethu uYesu Kristu ukuze bayamkele baze basindiswe!
Mateyu 9:38 . Ngoko thandaza eNkosini ukuba ikhuphe abasebenzi baye esivunweni sayo.
I ukufunda kwakhona ndaweni ukuba ummeli zamaKristu, mna ndiyakholwa ukuba umbingeleli, wathi lo mba ubalulekileyo esinalo namhlanje kukuba imozulu okanye okusingqongileyo. Hayi, hayi ngumba ophambili. Umba ophambili kukuba abantu kufuneka ukwamkela uYesu basindiswe.